Ogologo oge ole ka vidiyo gị kwesịrị ịdị na-akpakọ ndị na-ege ntị na obere nlebara anya? -SoNuker
N’ụwa nke anyị bi n’ime ya taa, e nwere ọtụtụ afọ ojuju. O nwere ike isiri gị ike ịdọta uche ndị na-ege gị ntị. Ndị na-ekiri gị na-agwụ ike ma na-adọpụ uche ngwa ngwa. Ọ bụrụ na vidiyo gị anaghị adọrọ mmasị ozugbo site na mmalite, ha ga-apụ pụọ wee gaa na vidiyo na-esote. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ndị ị ga-esi mee ka ndị na-ege gị ntị ghara ime uche ha.
Kedu ihe kwesịrị ịbụ ogologo vidiyo YouTube kacha mma?
Ọ bụrụ na ị na-eme vidiyo B2B na YouTube, ị kwesịrị idowe ya n'okpuru nkeji abụọ. Ụfọdụ ndị okike na-emepụta vidiyo nwere ogologo oge nke nwere ike ịdịru ihe karịrị awa iri na abụọ. Agbanyeghị, mgbe a bịara na ọdịnaya nwere akara, ị kwesịrị ịrapara na vidiyo dị mkpụmkpụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ na mgbasa ozi vidiyo, ọ kacha mma ka ị ghara ịbawanye ogologo ha gafere 12 sekọnd. Ọ bụrụ na ị na-aga maka mgbasa ozi buru ibu, sekọnd isii karịrị ezuru.
Ogologo nlebara anya mmadụ na-adị ihe dị ka nkeji iri abụọ. N'ihe banyere vidiyo ịntanetị, a na-ebelata oge nlebara anya na 20 sekọnd. Ogologo vidiyo YouTube dị oke mkpa n'ihi na ọ nwere ike imetụta ndị na-ekiri gị.
Ugbu a, ka anyị banye na ndụmọdụ ndị ọzọ ga-enyere gị aka iji obere nlebara anya jikọọ ndị na-ege ntị:
1. Mee ka vidiyo na-adọrọ adọrọ site na mmalite
Ka oge na-aga, vidiyo gị ga-akwụsị ịhụ ya. Ka ndị na-ekiri na-aga n'ihu na-ekiri vidiyo gị, ha nwere ike ịgwụ ike ma ọ bụ dọpụ uche ha. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye nkeji elekere YouTube gị, ị ga-agbakwunyerịrị akụkụ kacha amasị dị ka agba mbụ.
Ọ dị mkpa icheta na njikọ aka ndị na-ege gị ntị ga-enwe mbelata ahịrị. Agbanyeghị, ọ bụ n'ime sekọnd 20 mbụ mgbe ihe nlere ahụ nwere mbelata nke ukwuu. Ị nwere ike izere nke a site n'ịhụ na vidiyo gị na-adọrọ mmasị site na mmalite.
2. Mee ka o doo anya maka ebumnuche nke vidiyo ahụ
Ihe onyonyo ọ bụla nke vidiyo gị kwesịrị inye ndị na-ekiri gị ozi ọhụụ. Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịghọta isi ihe gị, ndị na-ekiri gị ga-akwụsị ige ntị n'ihe ị ga-ekwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-akwado ngwaahịa, ị nweghị ike ime ka akaebe gị dị ka mgbasa ozi ọjọọ na-amasị ngwaahịa ahụ mana enweghị ihe ọ bụla. N'okwu a, ị ga-eme ka ndị mmadụ mara kpọmkwem ihe mere ị na-akwado ngwaahịa a na otu ha nwere ike isi jiri ya. Ọ bụrụ na ndị na-ekiri gị achọpụta na ozi a na-enyere aka, ha ga-aga n'ihu na-ekiri vidiyo ahụ.
3. Tinye aka nke aka gị
Ka anyị kọwaa nke a site n’ịga n’ihu n’ihe atụ ahụ e kwuru n’isi nke abụọ. Mgbe ị na-akwado ngwaahịa na vidiyo, ịkwesighi ịmalite vidiyo site na ikwu maka ngwaahịa ahụ. Kama, ị kwesịrị ịkọrọ ya ahụmahụ gị onwe gị. Ọ bụrụ na ndị na-ekiri gị na-ejikọta ahụmahụ gị, ha ga-arapara n'ahụ ma lelee vidiyo ahụ dum.
O nwere mgbe ọ dị mkpa ka ị na-adị nkenke, na e nwekwara mgbe ị ga-eji nwayọọ nwayọọ. Ma n’agbanyeghị na a na-ahọrọ vidiyo ndị dị mkpụmkpụ n’ụwa a na-eme ngwa ngwa, ọ pụtaghị na vidiyo ogologo oge adịghị mkpa. Enwere ike iji ha wuo iguzosi ike n'ihe ika ma nyere ndị na-ege ntị aka jikọọ na ika ahụ. Ihe ị ga-achọ itinye uche na ya bụ akụkọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ekwu maka njirimara ngwaahịa ma ọ bụ na-enye stats ole na ole, ọ kacha mma ka ịmepụta obere ihe ọmụma nke na-eme ka ndị na-ekiri gị mara kpọmkwem ihe ha chọrọ ịma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ akụkọ, vidiyo ogologo bụ ụzọ ị ga-esi gaa.
Ahịa vidiyo bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi ahịa gị, YouTube bụkwa nnukwu ikpo okwu ị nwere ike iji maka ya. Agbanyeghị, na-enweghị usoro kwesịrị ekwesị, ọ nwere ike isi ike ịnweta ọwa gị n'ọnọdụ ịchọrọ. Obi dị m ụtọ na e nwere ụzọ isi nweta nnukwu ndị na-eso ụzọ n'ime obere oge, yana free YouTube ngosi. Site na SoNuker, ị ga-enwe ike zụta ihe ngosi YouTube, zụta ndị debanyere aha YouTube, zụtakwa mmasị YouTube. Ọ ga-enyere gị aka itolite ọwa gị wee nweta ihe ịga nke ọma ịchọrọ n'elu ikpo okwu.
Ogologo oge ole ka vidiyo gị kwesịrị ịdị na-akpakọ ndị na-ege ntị na obere nlebara anya? nke ndi dere SoNuker, 20 May 2022
Ndị a bụ ajụjụ ị ga-ajụ mgbe ị na-emepụta ozi akara maka ahịa YouTube
Na-ekpebi na ịkwesịrị ịme ihe kachasị nke atụmatụ ahịa YouTube. Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ịzụ ahịa nke ọma na YouTube bụ ozi akara gị. Izi ozi bu ihe di ike…